वनमन्त्री हुँदा सचिवलाई ‘शौचालयमा थुनेका’ यी नेताको घरजग्गा र गाडी सम्पत्ति श्रीमतीकै नाममा !
पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आर्पूति मन्त्री एवं नेकपा माओवादीको नेता हुन् मात्रिका यादव।
सर्वहारा पार्टीका नेता, ‘जननेता’, यस्तै–यस्तै उपमा र स्वनामधारी कम्युनिष्ट नेताहरूको धनसम्पत्तिको विवरण आश्चर्यजनक छ।
तर, यी वामपन्थी नेताले पनि आफ्नो नाममा चाहिँ सम्पत्ति राखेका छैनन्। सबै सम्पत्ति श्रीमतीकै नाममा।
माओवादी जनयुद्धका मधेश कमाण्डर पनि हुन् यादव। त्यति मात्रै होइन, उनी माओवादीको शीर्षनेतामध्येका एक हुन्।
प्रचण्डसँग लामो समयसम्म नजिक रहेर काम गरेका नेता यादव नेपाली राजनीतिमा राम्रो प्रभाव राख्छन्।
तत्कालीन नेकपाका एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि वि.सं. २०७४ साल फागुन १४ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आए नेता यादव।
वि.सं. २०७६ मंसिर पहिलो साता लालबाबु पण्डित, गोकर्ण बिष्टसँगै यादवलाई पनि ओलीले जिम्मेवारीबाट हटाए। झण्डै २१ महिना मन्त्री भएका यादव पटक–पटक विवादमा पनि आए।
जे होस्, उनले आफ्नी श्रीमतीको नाममा सम्पत्ति जोड्न चाहिँ भ्याएकै रहेछन्। मन्त्री भएपछि यादवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा उनीसँग केही छैन।
सम्पत्ति विवरणअनुसार उनी साँच्चै आर्थिक रुपमा गरीव देखिन्छन्। तर, श्रीमतीसँग करोडौंको सम्पत्ति छ।
कति छ सम्पत्ति?
पूर्वमन्त्री एवं माओवादी नेता यादवसँग श्रीमती हुन् प्रमिलादेवी यादव। प्रमिलादेवीको नाममा सिरहाको रामनगर तथा धनुषाको सवेलामा १० कठ्ठा जग्गा रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, ललितपुरको चापाँगाउँमा यादव दम्पत्तिको ३ रोपनी ४ आना जग्गा छ । त्यो जग्गा पनि मात्रिकाकी श्रीमती प्रमिलादेवीकै नाममा छ। यतिसम्मकी यादवको गाडी समेत श्रीमती प्रमिलादेवीकै नाममा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
यद्यपि, ‘सन्की’ नेताको छवि बनाएका यादव नैतिक रुपमा विमूख नभएको राजनीतिक अभियन्ताको रुपमा गनिन्छन्। ‘सम्पत्ति विवरण जे–जस्तो छ, त्यो मात्रिकाजीको व्यक्तिगत निर्णय र अधिकारको कुरा भयो, तर उहाँ अरु यस्तो करष्ट र मन्त्रालयमा हुँदा दलाली गर्ने खालको नेता होइन,’ माओवादीका एक नेताले भने।
वि.सं. २०३४ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (चौथो महाधिवेशन) बाट राजनीतिक यात्रा शुरु गरेका हुन् यादवले। उनी वि.सं. २०३६।०३८ सम्म सिरहा क्याम्पसमा दुई पटक अनेरास्ववियू सभापति बने।
यादवले जेल जीवन र लामो संघर्ष भोगेका छन्। विसं २०४० मा देव गुरुङको नेतृत्वमा विद्यार्थी संगठनमा केन्द्रीय सदस्य र पार्टीमा क्षेत्रीय ब्यूरो सदस्य बने।
विसं २०५०।५१ मा प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको एकता केन्द्रमा उनी संलग्न भए। विसं २०५९ मा सरकारसँग दोस्रो वार्तामा वार्ता टोलीको सदस्य बनेका थिए।
अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा वनमन्त्री बनेका यादवले तत्कालीन सचिवलाई शौचालयमा थुनेर अनुशासनको पाठ सिकाएको थिए। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको विवादका कारण मन्त्रीबाट राजीनामा पनि दिए।
विसं २०६४ मा संविधानसभामा समानुपातिकबाट सभासद् बने। पार्टीबाट अलग भई सभासद्बाट पनि राजीनामा दिएर उनी २०६५ माघ २९ गते माओवादी पुनर्गठन गरे।
मन्त्री यादवले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट शिक्षाशास्त्रमा प्रविणता प्रमाणपत्रसम्मको शिक्षा हासिल गरेका छन्।
त्यतिबेला पण्डित जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री थिए। ‘काठमाडौं उपत्यकालगायत सम्भव भएका ठाउँमा साइकल लेन बनाउन पहल गर्छु,’ पण्डितले बोलेको पुरानो फाइल पल्टाउँदा स्वदेश नेपालले यही भनाई फेला पार्‍यो।